Waa Shan Booda Waa Shan Jirti | Oromia Shall be Free
bilisummaa February 22, 2017	Comments Off on Waa Shan Booda Waa Shan Jirti
Qabeenyaa heddu kuufame booda hanni jirti
Rakkoo booda baldhoon jirti
Carraaqqii booda milkiin jirti
Hadhaa/bargoo booda firii mi’ooftu jirti
Qabsoo booda injifannoon jirti.
Namni kamuu yoo waa balleesse ceepha’amuun barbaachisaa dha. Ceephoon nama sirreessa. Namuu ceephoo yoo of irraa jalqabe bareedaa ta’a. Ceephoo madaalawaa/sirrii fi sirreessaa kaasuun barbaachisaadha. Ana garuu ceephoo addaattu na muuddate. Homa argan hundaaf na ceepha’an. Ceephoo koo doonitti naa fe’an. Kan isin dhibu ofiif yookaan gaariitti, yookaan motoratti, yookaan kan caalu komkolaatatti fe’uu dhiisiitii saaykilatti fe’uu hin dandeenne!! Kolfa! Kaa! Kaa! Isaan isaan miidha kaa yookaan miya fe’umsaa saaykila isaanii faa jalaa cabsa itti ulfaatee! Saaykilli isaanii haa cabdu, bixinxish haa jettuu! Kaa! Kaa! Doonicha ceephoo isaanii eennu galaanarra isaanii bololiisisa ree!! Kaa! Kaa!
Namni hunduu ima fiiga dhama’a, wal dhamaasa, wal kuffisa wal kaasa. Garuu dhiibbaa jabaa walirraan gayuun baayyate. Namni gariin qabeenna qabaa kuun beekumsa qaba. Hundinuu jiruu tana injifachuuf fiiga. Fiigicha jiruu jireennaa tan namni karaa walitti cufe tana keessatti. Fiigicha jiruu jireenyaa tana keessatti warri qabeennaa fi human fi beekumsa qabu duratti kutee jira, gara kallattii sirrii fi injifannoo; lallaafoon duubatti harca’eera, jireenni hiyyeessaa/lallaafaa hedduu bacancaroofte, bubbushoofte, dhangaggoofte. Anis warra duubatti hafe keessaa tokko. Warroonni beekumsa, qabeenyaa, human, deeggarsa kkf lallaafaa iraan tarkaanfatanii fuulduratti kutan. An mataa kootti hanqina qabaadhus dureeyyiin dugdaa/gurmuu kootti baadhee isaan tajaajilaa isaan miila koo irra ijjataa tarkaanfatanii darban, na hacuucanii, fuulduratti tarkaanfanna jennaanis karaan kan cufate. Garuu maaltu beeka osoo waaqni iddoo galumsaa iddoo iraa kaane taasisee silaa boqadhee mitii ree!!! Yookaan bakki galumsaa bakkuma jirru san osoo tahee achumatti gadi teennaa!!!! Worroonni duratti kutan ammas bakka ka’umsaatti deebi’uuf haa babargaafatanii; gaafas nu dursitoota taana.
Cimaa:- moo’icha irraan moo’icha kan dabale qofa osoo hin taane kan kufaatii illee injifatee moo’e
Laafaa:- kan kufaatii irraa baree jalaa ka’uud hin tattaafanne; kufaatii ofitti gadi hatkisu
Namicha tokkotuu dura arba argee hin beeku ture. Innis nama wayii wajjiin osoo deemanuu deemanuu arbatti dhufan innis abshaalumaan bineensicha barachuu waan fedheef namicha lammataatiin akkana jedhe. Bee bineensa kana namni hin beennes jiraa jedhe. Achumaan namichi lammataas sila arba moo jedheen. Ee jedheen namichaan lammataa. Akkanattis namichaaniis abshaalummaan arba bare jedhama.
Yeroo wayii namoonn lamaa biyya tokko keessa jiraataa turan. Isaanis osomaa jiraatan, jiraatan gaafa tokko wal lolan. Isaanis wal arrabsan. Namichaan duraas arraba hamaa arrabse; kan lammataas hanga tahe arrabse. Kan jalqabaa keessa dabree arraboota hahhamoo arrabse, arrabse mataa cabse qaanyesse. Achumaan harkaan walitti taranii wal buruqsan. Namoonnis iyyanii addaan guuraan. Kana booda jaarsonnis dhufanii dubbii jalqaban. Araarsuufis tattaafatan hin danda’amne dubbii bulfatan ; beellaman. Gaafni beellamaa gayees dubbatan. Achumaan namichaan arrabaan miidhame lammataa sun ani hin fixadhu, na ajjeesee, balleessee jedhe. Achumaan gaafa biraatti beellaman. Dhumarrattis beellamni gayee kadhaa hedduun araarsan dubbatanii mammaakanii; waaqnis araara fedhaa; mee adaraa fixadhaa; araaramaa jedhanii. Kana booda namoonnis gara qe’ee ofii deebi’anii jiruu itti fufan. Tura keessa gaafa wayii jarri wall ole kun walitti dhufe. Namichaan jalqabaa kan lammataatiin abboo akkam jedhe. Namichaa lammatallee gaarima erga jedhee booda kunoo madaa ulee keetii fayyee guutumatti garuu jecha ati naan jette hin fayyine; yoomillee hin fayyus jedheen jedhama. Kanaaf yoo yoo arraba hamaa manna dullaa hamaa wayya jedhama. Jechi zalaalamii jiraata. Yeroo darbuu jecha jecha hin darbine hin darbatin jedhama mitii ree!!!!
Maa oduun lafa maraa
Namni yaraan safaraa?
Simbirri asiif achii sirbitii wacii
Jettii asiif achii ciicii
Ijoolleenis walitti waccii
Ijoollee qofaa mitii guddaanis wacaa ta’ee
Malaa gadamatu kanaan bari’ee
Hunduu jedhee caacaa
Malaa gadatu gadaa wacaa!!
Guddaan gariin ta’ee ijoollee
Akkuma itti gorsu wallaalee!!
Hunduu ree ni qabdaa garee
Deemaa an isin jalaa goree
Kiyyumarra deemaa an xurree.
Gareen hunduu ni qabaa karaa
An xurrema koo irra deemaa jiraa!!
Namoonni ana safaraa
An hin qabuu oduu haaraa
Garootuma keessan irraa baraa
Walitti dhaamadhaa hadaraa!
Wal leellisaa feetan garee haaraa ijaaraa
Ana na hin oolchinee bakkas carraa!!!!
Previous Waraabeecha/(Bineensa) Biyya Bineesummaan Isaa Beekamutti Itillee Naaf Afaa Jedhu Mammaaksa Oromoo Keessatti Dhageeyee Hin Beeknu!
Next Ergaa haala yeroo (Koree qindeessituu warraaqsa biyyoleesa Oromiyaa irraa.)